Fihetsiketsehana ao Iran: Tifitra bala sy fanakatonana aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2019 5:17 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, русский, فارسی, Ελληνικά, Español, English
Mpanao fihetsiketsehana nandritra ny fihetsiketsehana tao Ariashahr, Tehran tamin'ny 15 Novambra 2019. Saripikan'i GTVM92 – Zon'ny mpamorona (CC BY-SA 4.0). https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84030078
Nipoaka ny fihetsiketsehana manerana an'i Iran manankarena solika hatramin'ny nanambaran'ny governemanta, tamin'ny misasakalina ny 15 Novambra, fa miakatra ny vidin'ny solika. Nilatsaka ny fanambarana rehefa hita fa ao anatin'ny fepetra ara-toekarena mahatsiravina ny firenena noho ny sazy henjana apetraky ny Amerikana, ny kolikoly ary ny tsy fahaiza-mitantana ao amin'ireo andrim-panjakana ara-bola. Nilaza ny governemanta fa natao hampiakarana ny vola miditra ny fiakaram-bidin'ny solika mba hamatsiana vola ho an'ireo olom-pirenena mahantra indrindra ao Iran.
Namaly ny fihetsiketsehana tamin'ny fomba maherisetra sy nahafatesana olona ny fanjakana, ary koa tamin'ny alalan'ny fanakatonana ny aterineto, saingy tsy nahomby nanakana ireo mpanao fihetsiketsehana hatreto. Hita fa miha ara-politika fa tsy ara-toekarena intsony ny teny filamatry ny fihetsiketsehana, ahitana ireo mpanao fihetsiketsehana miantsoantso manohitra ireo mpitondran'ny Repoblika Islamika, ny politikam-bahiny ary indraindray maneho fanohanana ny tarana-piandrianana Pahlavi.
Nomelohin'ny Amnesty International ny famoretana nataon'ny fanjakana:
Mihoronkoditra izahay amin'ny tatitra fa mpanao fihetsiketsehana am-polony no maty tany #Iran, an-jatony no naratra ary mihoatra ny 1000 nosamborina nanomboka tamin'ny zoma. Gaga izahay fa nakaton'ny manampahefana ny aterineto mba hanakanana ny tati-baovao momba ny famoretana mahery setra ataon'izy ireo. Manao fanadihadiana izahay ankehitriny.
Nanomboka maika tamin'ny fandoavam-bola mivantana nampanantenaina ho an'ireo Iraniana an-tapitrisany ny governemanta Iraniana, izay marika fa matahotra manoloana ny halehiben'ny fihetsiketsehana ny fitondrana, satria nandoro banky, sekoly ara-pivavahana, toby miaramila ary biraom-panjakana ny mpanao fihetsiketsehana.
Lalambe Tehran-Karaj, lalana fitaterana lehibe, nosakanan'ny fihetsiketsehana.
Bala sy voninkazo
Nahitana fihetsiketsehana miely patrana i Iran tokony ho roa taona lasa izay, ary raha misy fitoviana amin'ny fikomiana ankehitriny ireo fihetsiketsehana ireo, dia misy ihany koa ny fahasamihafana lehibe.
Saeed Payvandi, akademika sady mpahay sosiôlôjia monina any Paris nilaza tamin'ny Global Voices fa “tampoka ny hetsika ankehitriny ary tsy misy mpitarika sy fitakiana tsy mazava tahaka ny teo aloha tamin'ny taona 2017-18.” Nanamarika i Payvandi fa ny hira ataon'ny mpanao hetsi-panoherana dia mikendry manokana olo-malaza tahaka ny Mpitarika Faratampony Ayatollah Khamenei, sy ny Filoha Rouhani. Fahasamihafana lehibe hafa ihany koa, hoy i Payvandi ny hoe “mifanohitra tamin'ny roa taona lasa, miezaka ny ho hita maso amin'ny alàlan'ny fibodoana arabe sy ny kianja ireo mpanao fihetsiketsehana.”
Nilaza i Payvandi fa ny fiakaram-bidin'ny solika no “nanome ny maha-ara-dalàna ny toekarena ny hetsika, na dia lasa hiringiriny vetivety aza ny teny filamatra. … Ny olana lehibe, toy ny teo aloha, dia ny fiezahana hahazo ny hevitry ny besinimaro sy mitondra ny olona eny an-dalambe.”
Miombon-kevitra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny ampahany maro amin'ny vahoaka, hoy i Payvandi, saingy misalasala ny hanatevin-daharana azy ireo. “Fantatry ny manampahefana ny fisalasalana eo amin'ny saranga antonony sy ireo sangany tsy miankina amin'ny fanjakana, ary izany no mahatonga azy ireo hamorona korontana sy tsy-fandriampahalemana … Ao anatin'ny fotoana fohy, dia ny fanjakana Iraniana no mpandresy, satria hatahotra handray anjara.amin'ny hetsi-panoherana ny saranga antonony. “
Maty am-pahanginana ny vahoaka
Shahed Alavi, mpanao gazety manara-maso ny fihetsiketsehana, nilaza tamin'ny Global Voices fa iray amin'ireo fahasamihafana lehibe ny karazan'ireo saranga sosialy mandray anjara. “Roa taona lasa izay,” hoy i Alavi, “ireo olona mahantra indrindra any amin'ny ankamaroan'ny tanàna kely no tena nandray anjara.. Fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia ireo saranga antonony no nanatevin-daharana azy ireo, ary niely patrana kokoa ny fihetsiketsehana, nitranga tany amin'ireo tanàndehibe toa an'i Tehran, Shiraz, Isfahan, ary ireo tanàna kely ny fihetsiketsehana”.
Fahasamihafana lehibe iray hafa, hoy i Alavi, ny herisetra tafahoatra ampiasain'ny mpitandro ny filaminana. Araka ny loharanom-baovao iray avy amin’ny minisiteran’ny atitany, efa ho 200 ny isan’ny maty vokatr’izany, raha olona an’arivony no naratra ary farafahakeliny 1.000 no voasambotra. Nitatitra ihany koa ny Mpiambina Revolisionera ao Iran fa maty tao anatin'ny fifandonana tamin'ny mpanao fihetsiketsehana ny telo tamin'ireo mpiasany.
Raha manjaka foana ao amin'ny firenena ny herisetra sy ny famoretana, mampiroborobo fandriampahalemana sy hafatra tsy misy herisetra kosa ireo mpanao fihetsiketsehana sasany.
Mpanao fihetsiketsehana manome voninkazo ho an'ny polisy sady milaza hoe “Tsy fahavalo izahay”, tao Shiraz
Aiza ny aterinetiko?
Fahasamihafana hafa tamin'ireo fihetsiketsehana teo aloha ny halehiben'ny fanakatonana ny aterineto ankehitriny.
Manana tantara lava momba ny sivana, ny fanivanana sy ny famoretana mpiserasera i Iran, saingy manoloana ny fanakatonana saika ny aterineto rehetra tamin'ny sabotsy 16 novambra, niditra faritany vaovao ny governemanta. Nilaza tamin'ny CNN i Alp Toker, tale mpanatanteraka ao amin'ny NetBlocks, ONG mpiaro ny zo nomerika fa ny fanakatonana ny aterineto amin'izao fotoana izao no “fahatapahana mafy indrindra hitan'ny NetBlocks any amin'ny firenena raha ny resaka fahasarotana ara-teknika sy ny sakana no jerena.”
Amin Sabeti, mpikaroka momba ny aterineto monina any Londra nanamarika fa miseho ny fanakatonana raha vao mampiroborobo ny hevitra fahalalahan'ny aterineto ny filoha Rouhani sy ny minisitry ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao sy ny serasera. “Nahita fahatapahana tanteraka tao Iran izahay”, hoy i Sabeti. “Ny fomba hifandraisana lehibe sisa dia ilay efa antitra, antso an-telefônina.”
Nilaza ny masoivoho amerikanina tany Alemaina fa manana fahaizana ara-teknika hamerina ny fifandraisana aterineto any Iran i Etazonia, saingy mihevitra i Sabeti fa tsy azo tanterahina izany.
Ny fifantohana iraisam-pirenena
Niezaka nisarika ny saina tamin'ny alalan'ny fikarakarana fihetsiketsehana ireo Iraniana any ivelan'ny firenena, saingy sarotra ny manao fanerena ny fitondram-panjakan'i Iran, satria efa voasazy sy efa mitoka-monina ny firenena.
Araka ny filazan'i Azadeh Pourzand, mpikatroka ny zon'olombelona sy talen'ny Pourzand Foundation, miahy mafy ny endriny iraisampirenena ny governemanta ao Iran.
“Azo antoka fa manana ny hery rehetra ny fiarahamonina iraisam-pirenena mba hanery an'i Iran manoloana ny korontana vao haingana sy ny fampiasana herisetra hamoretana ny mpanao fihetsiketsehana,” hoy i Pourzand. “Raha tsy misy zavatra hafa, dia mety ho lasa fihetsika mahazatra ho an'ny Repoblika Islamika ny fidarohana sy ny famonoana ny mpanao fihetsiketsehana ary mahatonga ny fahaverezan'ny fankatoavana iraisam-pirenena sisa tavela.”
Mino i Lauzand anefa fa tsy hahasarika ny fifantohana mendrika azy ireo fihetsiketsehana tato ho ato. “Mety misy ifandraisany amin'ny ampahany amin'ny fiheverana ara-politika an'ireo gazety sy lahatsoratra sasany izany”, hoy izy. “Saingy, misy ihany koa ny antony iray hafa handinihana izao fotoana izao: mahita vaovao manerantany momba ny tsy fahafalian'ny vahoaka, ny fikomiana sy ny fihetsiketsehana isika. Ohatra, mandeha vaovao ankehitriny ny momba ireo mpanao fihetsiketsehana any Hong Kong, kanefa teny an-dalambe nandritra ny herinandro maro izy ireo ary tsy mbola nivoaka lohatenim-baovao. Maro ny zava-nitranga tany Shily tato ho ato ary tsy azoko antoka raha nanaraka izany akaiky ny Iranianina tahaka ny (antenaintsika) mba hanarahan’ izao tontolo izao antsika. “
Izany no antony nahatonga an'i Pourzand hino fa zava-dehibe ny fandraisan'ny am-pielezana Iraniana anjara. “Aleo apetraka amin'izany,” hoy izy. “Raha tsy ampy ny fandrakofana iraisam-pirenena, dia fahadisoantsika amin'ny ampahany ny tsy fananana fitaovana ampy mba hifandraisana sy hiarovana amin'ny fomba mahomby ny vaovao iraisam-pirenena ara-potoana amin'ny fiteny toy ny anglisy, frantsay, alemà, arabo, espaniola, sns.” , aza hadinoina ihany koa fa sarotra ny mahazo vaovao avy any Iran sy manamarina ny angon-drakitra … Mila vaovao farany tsy tapaka sy vavolombelona ny gazety iraisam-pirenena, izay indrisy fa tsy dia ananantsika izany… Na izany aza, manao vivery ny ainy ny Iraniana mba hihazona ny fanjakana ho tompon'andraikitra. Farafaharatsiny, mendrika ny ekena izy ireo fa tsy avela irery. “